Dhambaal Jaceyl Oo Raali Galin Ah - Cishqi.com
Waxaad dooneysaa inaad raali galiso qof aad jeceshahay una dirto dhambaal jaceyl oo raali galin ah, hadaba waxaad joogtaa halka saxda ah. U dir qofka aad jeceshahay dhambaal jaceyl oo raali galin ah,
Sida ugu fudud ee loo raali galiyo lamaanahaaga
Faa’iidada dhambaal jaceyl oo raali galin ah
Dirista dhambaal jaceyl oo raali galin ah ma ahan wax sidaa u dhib badan, haddii ay dhab kaa tahay inaad mar kale farxad geliso qalbiga qofka aad jeceshahay. Inaad qalad sameyso waa wax caadi ah balse inaadan qaladkaaga ka tanaasulin ma ahan wax caadi ah. Dadku waxay yiraahdaan raali galinta wanaagsan waxa ay u qeybsantaa 3 qeybood:
Qaladka anigaa iska leh
Sidee qaladka u saxnaa?
Qofku marka uu intaas sameeyo wuxuu sixi karo wixii dhacay laakin dadka badankood qodobka sadexaad way iska iloobaan. Taaasina waa wax laga fiican yahay.
Marka uu qalad dhaco gabar iyo wiilba waxay jecelyihiin in la barbaryo, jaceylka la dareensiiyo, laakin dhibaatadu waxay tahay mararka qaar labaduba iyagaa isla saxan, mana jiro mid ka tanaasulayo. Haddii uu midkood uu iska tanaasulo una diro dhambaal jaceyl oo raali galin ah sida dhambaalada soo socdo oo kale waxaa suurto gal ah in qofba qofka kale uu iska cafiyo. Jaceylku waa wax qurux badan, waxaase nasiib daro ah in aad ku weyso lamaanahaaga qalad yar, adigoo u diri karo kaliya hal dhambaal oo jaceyl ah, kaasoo aad ku raali galineyso lamaanahaaga.
Mid kale ha iloobin, marka aad u dirto lamaanahaaga dhambaal jaceyl oo raali galin ah waxa uu kuu fahmayaa ama ay kuu fahmeysaa inaad tahay qof daacad ah oo nafta lagu aamini karo, sababtoo waxaa la yiraahdaa: Raali galinta waxaa laga helaa qalbiyada daacada ah oo kaliya.
Halka eray ee aad igu tiri ayaa wuxuu bedelay jihadeyda
Waxaan meesha ka marneyn qof marka horeba aanan daacad ahayn, marka aad kala tagtaan waxaa lagu yaqaanaa in uusanba taa ka xumaan oo uusan kala jecleyn haddii aad kala tagtaan ama aad wada joogtaan, iska in uu kuu soo diro dhambaal jaceyl oo raali gali ah.
Qofka marka uu jaceylka daacad ka yahay haddii uusan awoodin xittaa dhambaal jaceyl oo raali galin ah, ugu yaraan wuxuu kuu soo dirayaa labadoo erayo oo uga xun yahay wixii dhacay. Tusaale ahaan erayadaan oo kale: Raali Galinta Ninka: Baro sida loo sasabo raga si fudud
Dhambaal jaceyl oo gaaban
Waxaan maalin walbaa qalbigeyga ku iraahdaa in uu joojiyo jaceylka aan kuu qabo. Laakin ima dhageysanayo. Waan ogahay in aan qalad sameeyay, laakin runtii aad ayaan uga xumahay. Waxaana doonayaa in aan mar kale dib kuu helo!
Dhambaal kale oo tusaale ah
1. Aan wada qaadano waqti si wadajir ah maalmaha soo socdo oo aan uga wada hadalno dhamaan xanuukii qaladaadkeena ee noo horseeday inaan kala tagno. Waan ka xumahay, waana kuu xiisay!
2. Marka aad ka fogaatay qalbigeyga wuu kula socday, gudahana wuu ku madhnaa. Fadlan soo noqo si aan kuu tuso mudnaantaada, qaladkeygana aan u soo af jaro.
3. Jaceylka aan kuu qabo waxa uu ku baahay jirkayga oo dhan, waxa uu gilgilay qalbigeyga, waxa uuna ku lumay dhiigeyga, waxa uu dhaqajiyay dhuuxeyga, waan ku baryaa mcn/macaanto haka bixin balantii iyo wacadkii inoo dhexeeyay.
Intaas wax adag miyaa?
Jawaabta macquulka: Maya. Laakin qofka markuusan ku jecleyn wey ku adag tahay, kama heleysid wax dhambaal ah ama ku saabsan raali galin ah.
Qish, halkaan waxaan ku diyaarinay erayo kale: Erayo jaceyl macaan ah
Maxaa lagu gartaa qofka markuu si xad dhaaf ah kuu jecelyahay?
Jawaabta wuxuu kuu soo dirayaa dhambaal jaceyl oo dheer ah ama qoraal dheer a, maxaa yeelay wuxuu rabaa in uu si daacad ah kaaga raali gali galiyo qaladka uu kaa galay. Uma arko xumaan iyo in uu is liidayo maxaa yeelay adiga in uu dhulka isku kaa dhigo oo uu kuu calaacalo waxba uma arko. Taasina waa astaan kamid ah oo muujineyso in uu qofka si dhab ah kuu jecelyahay.
Si kastaba ha noqotee haddii uu lamaanahaaga kaa xumaaday oo aad dooneyso in aad u dirto dhambaal jaceyl oo raali galin ah, adigoo muujinayo in ay dhab kaa tahay, kana tanaasushay qaladaadkaagii, waxaad u diri kartaa dhambaalkaan.
Dhambaal jaceyl oo raali galin ah mid dheer
Waxaan dareemeyaa waxyeello khaladkeyga dartiis ah mana garanayo sida loo daweeyo xanuunkaasi, laga yaabee in ay xilli dambe igu tahay, waxaanse isku mashquuliyaa murugadayda iyo dambiga aan hadda dareemayo. I cafi, mcn/macaanto.
Waxaan dareemayaa inaan yara wanaagsaneyn, waan ka murugoonayaa, waana ka welwelayaa, ma aqaano sida aan kuguula dhaqmay, anigoon xitaa ka fiirsanin ficilka aan sameynayo, hadana waxaan qaatay go’aano maskaxdayda khalkhal gelinaya. Iga raali noqo fadlan“.
Ka raali noqo mcn/macaanto wixii dhacay, ujeedkeygu ma ahayn inaan abuuro jawi kacsan iyo in aan kaa fogaado balse xanaaq ayaa iga tan badiyay maxaa yeelay waxaan dareemay masayr aad u weyn, laakin hadda waxaan fahmay inaan khaldanahay”.
Waxaan u maleynayaa in laguu buunbuuniyey faallooyinkeyga, ma aanan dooneynin inaan wax yeeleeyo dareenkaaga maxaa yeelay waxaan ogahay inaad i jeceshahay, fadlan i cafi mcn/macaanto. Waligey ma doonayo inaan ku waayo adiga mana doonayo inaan ku cidleeyo, maxaa yeelay waxaad ku weyn tahay qalbigeyga”.
Waxaad tahay raga/dumarka kan/tan ugu quruxda badan ee aan waligey la kulmo, tan/kan kaliya ee i wareerisay ayaa ah daqiiqadii ugu horeysay ee aan wada qaadanay, waana sababta aan u sameyn doono wax walbaa si aan u helo cafiskaaga. Aad baan kuu jecelahay mcn badan.
Jacaylku wuu qurux badan yahay, laakiin ma ahan mid kaamil ah, maxaa yeelay wax kasta oo nolosha ka mid ah waxay leeyihiin dib u dhac iyo hoos u dhac. Waxaana ka laabanayaa erayadii aan ku dhahay si aan kuu raali galiyo maxaa yeelay waxaan dareemayaa in aysan dhab iga ahayn. Aad baan kuu jeclahay macn/macaanto, iga raali noqo fadlan.
Waxaan kuu balan qaadayaa in aysan markale dhici doonin, waan ogahay in aysan sahal ahayn in la rumeeysto erayada qof fashilmay, laakiin fadlan isii faaiidada shakiga. Aynu ka bilowno xoqida, i cafi mcn/macaanto! “
Ma jiro eray xun oo la dhaho laakiin si khaldan uun baa loo tarjumaa. Waxaan qirayaa in wixii aan sheegay uusan ku jirin caqiido xumo, laga yaabee inaan doonayay inaan ku fahamsiiyo waxa qalbigeygu dareemayo iyo fikradaha la qaloociyay. Ha ii fahmin qalad Jaceylkeygiyow/jaceylkeygiyeey. “
Noloshu waxay na siisay fursad aan ku ogaanno oo aan isku jeclaano, waxaana go aan doqonnimo ah u qaatay oo aan ku fikiray inaad igu aqbali doonto daciifnimadayda had iyo jeer iga soocaysa jacaylka. I cafi mcn/macaanto, oo fursad kale i sii fadlan. “
Waxaan aaminay in uu waqtiga ilaalin doono gacaliyahayga maxaa yeelay wuxuu dareemay jaceyl, laakiin aad baan u qaldamay markaan ku siin waayey qiimaha iyo muhiimadda saaxiibtinimo. I cafi, mcn/macaanto “.
Aad ayaan uga xumahay waxa dhacay, mana noolaan karayo haddii aanan wax cafis ah kaa helin, waan ogahay inaanan helin fursadda ugu yar, laakiin waan daneeyaa, waqti kastaa oo ay igu qaadato waan ku guuleysan doonaa cafiskaaga, xitaa haddii aan nafteyda ku waayayo.
Waxaan dareemayaa cidlo iyo murugo, taasina waa sababta aan u qorayo sadarradan si aan kuugu sheego inaan aad kuu jeclahay oo aanan doonaynin inaan kala tagno, fadlan i cafi, iga raali noqo macaanto /mcn, haddii aan si aad ah kuugu qallafsanaa”.
Daqiiqadihii ugu dambeeyay!